Xaaladda Itoobiya oo aad looga deyrinayo | KEYDMEDIA ONLINE
ADIS-ABABA, Itoobiya - Kumanaan qof ayaa dhimatay, ku dhawaad 2 milyan ayaa barakacay, in ka badan 5 milyan ayaa ku tiirsan gargaarka cuntada degdegga ah, halka 400,000 ay halis ugu jiraan gaajo iyo macluul daran, sidaas oo ay tahay rabshadaha Itoobiya ayaa sii kordhaya kuna sii baaahaya goobo ka baxsan gobolka Tigray.
Gobolka Tigray ee Itoobiya, la'aanta sahay caafimaad, koronto joogto ah iyo shidaal-yari aad u daran, lacag -yari ka dhalatay bangiyada xiran, iyo shaqo la'aanta sii kordhaysa kadib markii warshadaha la xiray ama la bililiqaystay, ayaa nolosha ku sii adkaynaysa dadweynaha, sida ay sheegeen Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC).
"Xaaladda bani'aadamnimada waa mid aad u daran oo ka sii daraysa," ayay tiri Alyona Synenko, afhayeenka ICRC ee Afrika.
Qaramada Midoobay (UN) ayaa ka digtay in ka badan 400,000 oo Itoobiyaan ah oo halis ugu jira gaajo, warbixin la daabacay Jimcihii la soo dhaafay, QM waxay ku dhaleeceysay labada dhinac ee iska horimaadku ka dhaxeeyo inay caqabad ku yihiin socodsiinta gargaarka la gaarsiin lahaa dadka u baahan.
“Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay amartay xabbad joojin, laakiin hoggaanka Tigreega ayaa ku doodaya in xabbad joojintu aysan daacad ka ahayn, maxaa yeelay Addis Ababa waxay xayiraad ku soo rogaysaa gobolka,” ayuu Mutiga u sheegay warbaahinta.
Dhanka kale, toddobaadkii hore, degaanka Soomaalida Itoobiya, dhallinyaro ka careysan dagaallada uu Maamulka Cagjar ku fiirsanayo shacabka Gobolka Sitti ayaa jaray waddo muhiim u ah ganacsiga oo isku xirta caasimadda Addis Ababa ee aan badda lahayn iyo dekedda Jabuuti.
Dawlad -deegaanka Soomaalida, ayaa sheegtay in maleeshiyada Canfarta “ay xasuuqeen boqolaal qof oo rayid ah” Sabtidii hore magaalada Garbo-ciise, oo xuddun u ah muranka xuduudaha gobolka ee waqooyi -bari Itoobiya.
Axaddii, gobolka Amxaarada ayaa ugu baaqay "dhammaan dhallinyarada" inay hubka qaataan si ay uga hortagaan ciidamada ka socda gobolka deriska la ah ee Tigray, kuwaas oo sheegtay inay la wareegeen degaanno Amxaaradu leeyihiin.
Calaamadaha isir -sifeynta, rajada macaluusha iyo cabsida rabshadaha ee gaartay dalalka deriska ah, ayaa ku kalliftay beesha caalamka inay cadaadis saarto Addis Ababa si loo joojiyo dagaalka.